Kusetshenziswa Kakhulu i-Ginger Extraction eyenziwe ngeSonication - iHielscher Ultrasound Technology
Isizinda se-ultrasonic samafutha abalulekile kanye nama-acidi esebenzayo kusuka ku-ginger okuqinisekisiwe ngokusebenza kahle nokukhiqiza okuphezulu.
Isizinda se-ultrasonic yinqubo emnene, engezona ezishisayo eveza izitshalo eziphezulu.
Ngenkathi ezinye izindlela zokucubungula zilinganiselwe ekukhusheni kwabo, i-sonication ingaba yinkimbinkimbi ngokuphelele kunanoma yiliphi izinga lokukhiqiza ezimbonini.
I-Ginger (Zingiber officinale) iqukethe inani eliphakeme lamafutha asebenzayo afana namafutha abalulekile,  -gingerol, ama-oleoresins namanye ama-phytochemicals amakhemikhali, okuyinto efunwa izinto ngenxa yokunambitheka, iphunga, kanye nemiphumela yemithi.
Ukuze usebenzise amakhemikhali asebenzayo we-ginger, kufanele akhululwe emthonjeni we-ginger (rhizome) ngokukhipha. Izindlela ezijwayelekile zokukhipha i-ginger, njenge-distillation ye-steam noma isizinda se-solvent inezinselele eziningana: Ziyaziwa ukuthi zichitha isikhathi, zidinga amanani amaningi amakhemikhali futhi inezinqubo ezincane zokusebenza.
Izinhlelo zokukhishwa kwe-Ultrasonic zisetshenziselwa ukukhipha i-gingerol nezinye izinto ezithuthukisa impilo ku-ginger. Ividiyo ikhombisa i-UP100H esikhungweni se-ginger.
Isizinda se-Ultrasonic seGinger eyomile usebenzisa i-UP100H
Ultrasonic Gingerol Extraction
Isizinda se-Ultrasonic yindlela engeyona ye-thermal esekelwe kwisimiso cavitation, amabutho ekhanda eliphezulu kanye nama-microturbulences aphule izindonga zamaseli ngendlela efanayo, okwenza kube lula ukukhululwa kwamakhemikhali wezinto ezitshalayo ezitshalweni ngaphandle kokungcoliswa kwamakhemikhali. Amazinga okushisa omnene asindisa ama-extracts ayifunayo (isib. Ama-antioxidants, polyphenols, njll) kusuka ekuhlakalweni okushisayo. Ngaphezu kwalokho, isizinda se-ultrasonically-basizwa singenziwa kaningi e-solvents aqueous (= amanzi). Ukugwema izixazululo eziphilayo (isib. I-acetone, i-hexane) kubaluleke kakhulu ekufakweni kwamakhemikhali kamuva ahlanganiswe emikhiqizweni yokudla nemithi.
I-Sonication isetshenziselwe ukukhipha izingxenye ezisebenzayo ezivela ezinhlobonhlobo eziningi zezitshalo nezicubu ezihlukahlukene. Kufakazelwa ukuthi kuyashesha kakhulu kunezinqubo ezivamile zokukhipha.
izimo zenqubo ezincane
ephephile & umsebenzi olula
ukusebenza kahle okukhulu
ukucubungula kwe-inline noma kwe-batch
I-UIP2000hdT nge-agitator ethangini lokukhishwa
Ikhwalithi Yokukhishwa Okuphezulu
Ukukhishwa kwamandla ultrasonics kunenzuzo kunezinye izindlela zamasiko zendabuko, okuvame ukulinganiselwa kumqulu amancane. Isizinda se-ultrasonic singenziwa njenge-batch noma inqubo ye-inline usebenzisa isisindo sokugeleza. Amandla amakhulu e-ultrasonic aphikisana noma aphule i-matrix yeselula ukuze zonke izinto ze-intracellular zikhishwe ngokushesha futhi kalula, ukuze isivuno esiphezulu siphume. Ukusetshenziswa kwemishini ye-ultrasound kuqinisekisa ukuthi inqubo elula futhi elula, i-solvent edingekayo ingashintshwa ngamanzi noma inani le-solvent lingancishiswa ngokuphawulekayo. Ngaphezu kwalokho, izinga lokushisa eliphansi kanye nesikhashana esifushane sokuvimbela ukuvimbela amakhemikhali asebenzayo ngokumelene nokungcoliswa ukuze izinga eliphezulu likhishwe ngebanga le-pharma / ukudla.
I-Hielscher Ultrasonics Equipment
I-Hielscher Ultrasonics inikeza izinhlelo ezinamandla, ezinokwethenjelwa ze-ultrasonic zebheki-phezulu, isitshalo sezindiza kanye nokucubungula okugcwele kwezimboni kwanoma yiliphi ivolumu. Izinqubo zethu ezinamandla ze-ultrasonic zingasetshenziselwa ukuqhutshwa kwe-batch ne-inline processing. Ukulawula okulula futhi okuqondile kuzo zonke izigaba zomsebenzi ukuqinisekisa izinga eliphakeme lokukhipha eliphezulu nenqubo ephezulu yokusebenza.
Isethaphu ye-ultrasonic ngokwezifiso
I-Ginger ngumthombo wesitshalo ocebile ngama-phenolic yemvelo kanye ne-flavonoid antioxidants.
Iphunga elimnandi nelinambitheka le-ginger kubangelwa amafutha ashubile ahlanganisa u-1-3% wesisindo se-ginger fresh, ngokuyinhloko ehlanganisa izingerone, shogaols kanye nama-gingerol  -gingerol (1- ′-hydroxy-3′-methoxyphenyl] -5-hydroxy-3-decanone) njengengxenye enkulu ye-pungent.
I-Zingerone ikhiqizwa kusuka ku-gingerols ngesikhathi sokuma (ngaphansi kokushisa) futhi ine-pungency ephansi kanye nephunga elimnandi-iphunga elimnandi. I-Zingerone, ebizwa nangokuthi i-vanillylacetone, abanye bacatshangwa ukuthi iyisici esiyinhloko se-pungency ye-ginger, kodwa inikeza “elimnandi” ukunambitheka kwe-ginger ephekwe. I-Zingerone ifana nesakhiwo samakhemikhali kwamanye amakhemikhali enambitheka njenge-vanillin ne-eugenol. It isetshenziswa njengendlela flavour wengeze amafutha spice kanye perfumery ukwethula amafutha okubabayo.
Amafutha abalulekile yi-liquid hydrophobic egxilile equkethe iphunga elivuthayo elivela ezitshalweni. Amafutha abalulekile nawo ayaziwa njengamafutha ashubile, amafutha e-ethereal, aetherolea, noma nje njengamafutha esitshalo asuka kuwo, njengamafutha a-rose, amafutha we-ginger, amafutha e-sandalwood, amafutha e-peppermint, amafutha wemononi noma (amnandi) amafutha e-orange .
Amafutha abalulekile asetshenziswa kabanzi futhi angatholakala emikhiqizo eminingi yabathengi, isib. Ekudleni naseziphuzweni zokunambitheka, ngezingcweti nezindlu zangasese zephunga elimnandi, nasemithi yokwelapha kanye nemithi yokwelapha ngemiphumela yokwelapha. Amafutha ayimqoka abhekene neziphunga zawo ezikhethekile. Amafutha abalulekile avunyelwe njengezithako eziphephile zokudla, imikhiqizo yezokwelapha nemithi yokwelapha.